Haddaan Madaxweynaha ahaan lahaa! | KEYDMEDIA ONLINE
By Bashiir M. Xersi - In kasta oo aan ogahay in Aragtida koowaad ee cinwaankaa laga qaadan karo tahay: “MADAXTINIMO JECELAA!” amaba noqon karta meeshii laga dhihi jiray: “Habar fadhida Lagdan la fudud!”. Kaba sii darane, aanba ogahay dhibka qarada weyn ee horyaal ninka Soomaali madax u ah ama maamulkeeda qayb ka ehe.
Haddana “Nin xil qaaday eed qaadye!” bal aan ku dhiirrado inaan dhawr qodob ka qoro, oo aan ku qilaafi lahaa Madaxweynaha.
Inta aanan gudagalin tallaabooyinka aan qaadi lahaa xilligan qallafsan oo kale, haddaan Madaxweynaha ahaan lahaa, ayaan doonayaa inaan wax yar ka iraa hoggaanka iyo hoggaaminta, dabcan ayna halbeeg u tahay hoggaamiyaha, illeen labada hore kan dambe la’aantood waxma ahaadeene, inuu isagu hal abuuro ka sokow, waxayba ku xiran yihiin hawshiisa, halka uu higsanayo iyo natiijada wax qabadkiisa ah.
In kasta oo casrigan qaab nololeedka dadku aad u hormartay, ay jiraan shuruudo badan oo hoggaanka, hoggaaminta iyo hoggaamiyahaba lagu xiro, haddana, kuwaa iyo kuwa dib ka imaan kara ama kuwo laga gudbayba sida loo nool yahay awgeed, waxaa biyo kama dhibcaan ah, in hoggaamiyaha aan GACAN LAGU SAMAYN, SANDUUQ DOORASHANA laga soo dhex bixin, ee ay tahay ABUURIS iyo BAXAALLI hore, oo dabcan ay wehliso WAAYO ARAGNIMO iyo KHIBRAD nololeed, bal murtidan dhuux: “Dadku waa : Madax ku cirroole [Waayeel] Maan ku cirroole [Waayo arag] iyo Mijo ku cirroole [Dalmar/Dhulmareen]”.
Dhibka Soomaalida la degay ee isugu jira faragalinta shisheeye, shisheeye kalkaalka, qabyaaladda iyo dhimaalka dhaqanka, si kale haddaan u dhaho: lagdanka gudaha iyo loollanka dibadda ka sokow, waxaa jira arrin muhim ah, oo aan wali lagu baraarugin, haddaan taa xalkeeda la helinna aan xalka Soomaaliya soo degdegayn, haddii uusan qar dheer iyo haadaan ka sii dhicin.
Arrinta lagu baraarugi waayey waxay tahay: HOGGAAMIYE u qalma inuu Soomaliya hoggaansho, ama ugu yaraan leh astaan hoggaamiye, dib u eeg sooyaalka, ka billow Cali Mahdi Maxamed, C/qaasim Salaad Xasan, C/laahi Yuusuf, Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekha hadda jooga, qaarkood Arina lama raacsadeen iska daa in Qaran ay hoggaanshaane, haddana, madaxweyne baan ka dhigannay, dabcan doonistooda waxaa ka muhimsan inaan anagu u dhul xaarno.
Hoggaanka qalloocan ee Soomaalida la haray maanta ma soo billaaban, bal adba sooyaalka dib u eeg, Ina Cabidille Xasan inuu sida Alshabaab u dhaqmayey marka laga soo tago, oo KALI ISLAAM ahaa, dhanka kale, waxaa laga dhaxlay eragii ahaa: “WAXAA XUJOWDAY!” Maxamed Siyaad Barre, dadku marka ay ka yaabeen caburintiisa iyo cadaadiskiisa ayey dheheen: “AMA AFWEYNE AMMAAN AMA AFGOOYE AAD!” haddaba xaggee wax ka qaldan yihiin?!
Nabadsugidda iyo ammaanka
La dagaallana Argagixisada iyo Burcadbadeedda
Sii wadidda wadahallada Koofurta iyo Waqooyiga
Haddaan ka baaqdana uma dirsadeen inuu wakiil iga noqdo Mudane Gaas, maxaa yeelay mudane Gaas Dunidu waxay ku eedaysay Musuqmaasuq, Soomaaliduna waxau ku summadday Qabyaalad. Aqriste, ma aqbali lahayd inuu ninkaa oo kale ku metelo, marka laga soo tago inaadba fursad qaali ah luminayso? Maxaa u diiday inuu dirsado mudane Jawaari oo ay isla wada cusub yihiin, oo aan tuhun dhaqaale lunsi laga qabin, qabyaaladna wali lagu sheegin?!
Haddaan Madaxweynaha ahaan lahaa: Muddo gaaban baan ku dajin lahaa qorshe la xiriira ammaanka iyo nabadgalyada, inuusan si sahlan ku qabsoomayn waan ogahay, haddana, sheegiddiisa iyo hadalhayntiisu waxbay taraysaa, ha ahaato dadka nabaddooda la sugayo iyo kuwa laga ilaalinayaba, maxaa yeelay qayb weyn oo ka mid ah ammaan xumada jirta waxaa xilkeeda leh madaxda qaabilsan nabadsugidda iyo ciidanka, badankoodana xilka waan ka qaadi lahaa gaar ahaan kuwooda baaritaannadu ku socdaan ama hore loogu helay falal aan suubbanayn!
Ugu dambayn, maalinnimadii doorashada Obama oo aniga habeen ii ahayd, baa anoo daawanaya program laga diyaarshay ayaa waxaa aad i taabtay; Obama oo inta gaarigiisa raacay Istaafkiisa Quraac u doonay, qof walba wixii uu dalbaday u soo gaday, ee lahaa Qaxwo, Rooti Iyo Baradho IQB.
Muuqaalkan waxaan ka dhex waayey madaxda dunida Muslinka, gaar ahaan kuwa Soomaalida, marka laga reebo dhacdooyin Taariikhi ah oo la sheego, oo haddaa taa ma inagaa u joognay. “Indhahaa kuu Macallina” baa Muqdisha laga yiraa markan oo kale, maadaama aan kor ku xusay Hoggaamiyaha aan mudannahay. Bal idinka siday idin la tahay; Hoggaamiye caynka Obama oo kale ah?!